> Resource> Video> Olee otú iji tọghata gụgharia Video ka MP3?
A gụgharia video pụtara a video a na-akpọ kpọmkwem site internet, ọ bụghị site na kọmputa gị. Ya mere, ị pụghị egwu ya offline gwụla ma ị ibudata gụgharia video gị PC. Converting nkwanye video ka MP3 pụtara na ị wepụ audio si nkwanye video ka MP3, na-enweghị ihe oyiyi ma ọdịyo.
Ị pụrụ ịhọrọ download gụgharia video site na iji a ngwá ọrụ mbụ, wee tọghata audio si nkwanye video ka MP3 site na iji ngwá ọrụ ọzọ. Ọ dịghị, okorobịa! Ọ bụ kwa mgbagwoju anya, ọ bụghị ya? Gịnị bụ nke ka njọ, converting usoro nwere ike ime ka audio ọnwụ n'oge gụgharia Video ka MP3 akakabarede.
Ebe a, m ikwuputa a dị mfe na elu-oru oma ụzọ-enyere gị aka tọghata nkwanye video ka MP3. The pụrụ ịdabere na gụgharia video ka MP3 Ntụgharị m ịmụta bụ Streaming Audio Recorder.
Ọ na-e idekọ ọdịyo na na-azọpụta ya na MP3 faịlụ dị ka gụgharia video arụ site na kọmputa gị si ụda kaadị. Ya mere, ị nwere ike iji ya idekọ nkwanye video ka MP3 enweghị ihe ọ bụla ọnwụ na ọdịyo. Nwere mmasị na ya? Biko gaa na.
Nzọụkwụ 1: Wụnye na-agba ọsọ nkwanye video ka MP3 Ntụgharị
Nke a gụgharia video ka MP3 Ntụgharị bụ dị ebe a site na ịpị n'okpuru njikọ. Mgbe download, wụnye na ẹkedori ya.
Nzọụkwụ 2: Play a gụgharia video
Chọta na-egwu a gụgharia video ị chọrọ ka ịdekọ na nchọgharị gị. Iji hụ na gụgharia video nwere ike kpamkpam dere ya n'otu MP3 faịlụ, ị ga-mma ka n'aka na nke a gụgharia video nwere ike igwu were were n'oge ndekọ. Dị nnọọ pịa "kwụsịtụ"-eme ka ọ n'ụzọ zuru ezu echekwa ka anya dị ka video amalite na-egwu.
Nzọụkwụ 3: Malite iji tọghata nkwanye video ka MP3
Mgbe ọ okokụre 100% echekwa, pịa "Record" bọtịnụ na elu akaekpe nke a na ngwa isi interface. Wee pịa "egwu" button na-egwu gụgharia video. Mgbe ebre nke gụgharia video dị n'elu, ọdịyo faịlụ na MP3 ga-akpaghị aka n'ịwa ahụ n'ọbá akwụkwọ.
Ọ na-mere! Ọ bụrụ na ị na-eche ebe MP3 faịlụ a na-echekwa na PC gị na, ị nwere ike nri-pịa faịlụ iji họrọ "Open na nchekwa" nhọrọ.
Ọ dị mfe, ọ bụghị ya? Iji tọghata nkwanye video ka MP3 n'ụzọ dị otú a, ị na-adịghị mkpa ibudata gụgharia video mbụ. Ọ ga-azọpụta unu a otutu oge na ego. N'ezie, nke a na-eji ngwa na-emekwa ka ị nwee wepụ audio si video echekwara na gị PC ka MP3 na ezi àgwà.
Extra n'ọnụ: Mgbe nbudata ndị a niile MP3 faịlụ site na nkwanye video, ị nwere ike iji iTunes ịhazi songs. Ma songs kwesịrị inwe zuru ezu ọmụma. Ebe a bụ a na-atụ aro ngwá ọrụ iji nyere. Wondershare TidyMyMusic maka Mac fixes na mislabeled songs gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na ọbụna downloads album nkà na lyrics ka embed na MP3 faịlụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ pụrụ inyere wepụ duplicated songs. Download onye nwere a-agbalị. Na ị na-agbarapụ hụrụ ya n'anya.
Ị nwere ike ibudata a usoro n'okpuru:
Top 5 Atụmatụ gị mkpa maara banyere nkume ihuenyo edekọ